इन्फ्लेटेबल जाकुजी - के तपाईंलाई यसका सबै ठूला फाइदाहरू थाहा छ? | बेजिया
इन्फ्लेटेबल जाकुजी: के तपाईंलाई यसको ठूला फाइदाहरू थाहा छ?
सुसाना Godoy | 07/04/2021 16:00 | घर
एक inflatable जाकुजी हुनु हाम्रो घर र पक्कै हाम्रो बगैचा को लागी एक उत्तम विकल्प हो। यदि हामी दुबै पक्षमा क्षेत्र छ भने यो सजावट कसरी लिने भन्ने बारेमा सोच्नको लागि समय आइसकेको छ र यो सोच विचार गर्दा कि यो आज हामीले तपाईंलाई प्रस्ताव गर्ने छौं र तपाईंलाई पक्कै पनि मनपर्नेछ।
किनभने ज्याकूजी हुनु धेरैको महान सपना हो। तर केवल यो मात्र होइन कि हामीसँग छ, तर किनभने यसले वास्तवमै ठूलो लाभहरू छन् जुन हामीले विचार गर्नुपर्दछ। केवल यस तरिकामा, तपाईं यसलाई किन्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर श clear्का हटाउनुहुन्छ, तर हामी तपाईंलाई पहिले नै बताउँछौं कि यो संकल्प तपाईं र सम्पूर्ण परिवारका लागि सबैभन्दा सकारात्मक हुनेछ। पत्ता लगाउनू!
1 इन्फ्लाटेबल जाकूजीलाई धन्यवाद तनावलाई बिदाइ गर्नुहोस्
2 तपाईं मांसपेशियों को दुखाइ राहत हुनेछ
3 तपाईं जहिले चाहानुहुन्छ भेला गर्न वा असीमित गर्न सक्नुहुन्छ
4 छाला को उपस्थिति सुधार हुनेछ
5 जोर्नीशोथका लागि विशेष उपचार
इन्फ्लाटेबल जाकूजीलाई धन्यवाद तनावलाई बिदाइ गर्नुहोस्
दुबै जाकूजी र स्पा, एक प्रकारको पोखरी हो जसमा बुलबुलेहरू उपचारात्मक छन्। त्यसोभए ती मध्ये पहिलो ठूलो लाभ यो हो कि यसले तपाईंको तनावलाई कम गर्न सक्छ। पक्कै पनि कुनै दिन छैन जब तपाईं पूर्ण आराम गर्न सक्नुहुन्छ। यसले काम, घर र अन्य धेरै समस्याहरूको कारण शरीरलाई सँधै तनावपूर्ण बनाउँदछ। त्यसोभए, बुलबुले बिचको स्नानले ती सबै अनुबन्धित भागहरूलाई आराम गर्नेछ र तपाईंले ठूलो राहत महसुस गर्नुहुनेछ जुन धेरै तनावलाई पछि छोड्दा आउँछ। के तपाईंले अहिलेसम्म प्रयास गर्नुभयो?
तपाईं मांसपेशियों को दुखाइ राहत हुनेछ
अघि हामीले तनाव र केही हदसम्म सम्बन्धित कुरा उल्लेख गर्यौं। किनभने दु: ख पनि थपिएको समस्याहरूको एक श्रृंखला हुन सक्छ। विशेष गरी यदि तिनीहरू मांसपेशिहरू हुन् भने, तपाईं एक फुलेको जाकूजीको साथ स्वास्थ्य प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसका लागि यो जेटहरूको प्रत्येक बाहिरै आउँनेछ जोसँग सबै प्रख्यात छ। पक्का संचलन सक्रिय गर्नाले, यसले क्षेत्र आराम गर्नेछ र धेरै कम चोट पुर्‍याउँछ हामी सोच्न भन्दा। यो तातो पानी र सक्रिय जेटको संयोजनको अंश हो। प्रत्येक दिन केही मिनेट मात्र खर्च गर्दा हामी छिट्टै यी पीडाहरूको विकास देख्नेछौं।
तपाईं जहिले चाहानुहुन्छ भेला गर्न वा असीमित गर्न सक्नुहुन्छ
भेला हुने र बिच्छेदन गर्न सकिने हरेक चीजको बारे यो राम्रो हो, त्यसैले यस अवस्थामा यो पनि पछाडि पछाडि छैन। सायद वसन्त orतु वा ग्रीष्म itतुमा यसलाई बाहिर आरोहण गर्ने बारेमा सोच्न उचित हुन्छ, जाडोको मौसममा, तपाईं अर्को सूचना नभएसम्म यसलाई विच्छेदन गर्न सक्नुहुनेछ। हामी के भन्न सक्दछौं कि यो व्यावहारिक कुरा हो र यसले हामीलाई बहुमूल्यता दिन्छ, जस्तो कि यो हामी मनपर्दछौं। तसर्थ, यो ध्यानमा लिनको लागि उत्तम पोइन्टहरूको अर्को हो।
छाला को उपस्थिति सुधार हुनेछ
किनभने सबै फाइदाहरूले हाम्रो भित्री ध्यान केन्द्रित गर्दैनन्, तर ती बाहिरी रूपमा पनि देखिन सकिन्छ। यसको मतलब यो हो कि यो छाला हो जुन अझ धेरै कुरा गर्न बाँकी छ। एकातिर यो अधिक हाइड्रेटेड देखिने छ। जसले एकै समयमा यसलाई सहज र चाउरो मुक्त बनाउनेछ। त्यसोभए, पक्कै पनि तपाईं एक inflatable जाकूजी किन्न भनेर प्रतिरोध गर्न सक्षम हुनुहुन्न भनेर थाहा पाएर कि तपाईको स्वास्थ्य मात्र सुधार गर्ने छैन, तर यी सबै बाहिरबाट देखिन्छ।
जोर्नीशोथका लागि विशेष उपचार
सत्य केहि छ हड्डीको प्रकार जस्तै रोगहरुतिनीहरूसँग सबैभन्दा सही उपचार छैन। त्यो हो, हामीले उनीहरूसँग लामो समय सम्म बाँच्नु पर्छ। तर तपाईं तिनीहरूलाई केहि कम गर्न को लागी केहि सरल विकल्प छान्नु पर्छ। यसैकारण हामी ज्याकुजीको बारेमा कुरा गर्दैछौं। पानी र गर्मीको संयोजनले केही स्वास्थ्य समस्याहरूलाई प्रमोट गर्न, हामीले हेरिरहेका छौं। यो सत्य हो कि दीर्घकालीन रोगहरूले विजय हासिल गर्दछ तर वास्तवमै यस कदमलाई धन्यबाद पनि, हामी सुधार गर्छौं र एक सकारात्मक विकासको सूचना पाउँछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » घर » इन्फ्लेटेबल जाकुजी: के तपाईंलाई यसको ठूला फाइदाहरू थाहा छ?
Uterqüe ले ला फ्रेस्का प्रस्तुत गर्दछ, यसको नयाँ SS21 प्रकाशन घर
तपाईको कपाल छिटो बढ्नको लागि एक्स्फोलियसन साँचो हो